पाँच सय र हजारको नोट बन्द गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे - Nayapul Online
प्रकाशित मिति : Monday, June 4, 2018 nayapulonline
acquire tadalafil, acquire dapoxetine. नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशमा भैरहेको भ्रष्टाचार रोक्न पाँच सय र एक हजार दरका नोट बन्द गरिनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा एक सय रुपैयाँ दरको नोटमात्रै चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चितवनको सौराहामा बिहीबार नेपाल फोटो पत्रकार महासंघको पहिलो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले भने, ‘नेपालमा भ्रष्टाचार पाँच सय र एक हजारको नोटमा टेकेर गरिएको छ । नोटकै कारण भ्रष्टाचार बढेको छ ।
A Background In Vital Elements In BrideBoutique
‘प्रदेश नम्बर २ सरकारको गतिविधि सन्तोषजनक भएन’: महतो
रोकिएन वर्षा असोजमा पनि ! कैलालीका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा